तपाईसँग भएको पुरानो नोट बेच्नुस र लखपति बन्नुस्, १० लाख भन्दा बढी यी पुरानो नोटको मुल्य ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
तपाईसँग भएको पुरानो नोट बेच्नुस र लखपति बन्नुस्, १० लाख भन्दा बढी यी पुरानो नोटको मुल्य ?
केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ । तपाई संग नेपाली पुरानो नोट छ ! यसरि बिक्रि गर्नुहोस इन्टरनेटमा ।
आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु होला । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला eBay को नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला । eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ । त्यहाँ ५ देखि १०० सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ।